Rooble;"Waxaa naga go’an in aan ka jawaabno baahiyaha ciidankeenna" - Jowhar somali news leader
Rooble;”Waxaa naga go’an in aan ka jawaabno baahiyaha ciidankeenna”
By Mahad	 On Jul 8, 2021
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho uu ugu kuur-geliyey baahiyaha ciidanka ku tagey taliska qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga ayaa ku boggaadiyey difaaca dalka iyo howlgalada ay ku beegsanayaan kooxaha argagixisada.
Taliska Qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgasha deegaannada Jubaland, fadhigooduna yahay magaalada Kismaayo ayaa Ra’iisul Wasaaraha warbixin ka siiyey daadaallada ay argagixisada kaga xoreynayaan deegaannada Jubaland iyo baahiyaha ay rabaan in wax lagala qabto.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ammaanay guulaha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan kooxaha Nabad-Diidka. Isagoona balan qaaday in xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto wax ka qabashada baahiyaha taliska qeybta 43-aad, iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida.
Ku soo noqoshada Ina Qaddafi ee Liibiya ma tahay ikhtiyaar…
Dowlada Pakistan oo ka caawinaysa Soomaaliya dhismaha…
“Waxaan maanta booqday Taliska qeybta 43aad ee Ciidanka Xoogga Dalka. Geesiyaasha CXD way ku mahadsan yihiin sida nafhurnimada leh ee ay ugu heellan yihiin difaaca dalka iyo dadka. Waxaa naga go’an in aan ka jawaabno baahiyaha ciidankeenna ee agab, tababar iyo taageero walba ee ay u baahan yihiin”.
Kormeerka Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku weheliyey Madaxweynaha Dowlad-goleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, Wasiirro, Xildhibaann iyo madax heer federaal iyo dowlad-goboleed ah.
Mahad 3401 posts
Biden says US military mission in Afghanistan will end on August 31
PM Roble we are committed to responding to the needs of our troops
Faahfaahin qarax ka dhacay xarunta maamulka degmada Ceel-Waaq
Serbiya oo ka mid noqotay dalalka Yurub ee lagu tegi karo Baasaboorka Soomaaliya.
AMISOM oo maxkamad soo taagaysa askar dad rayid ah ku dishay Golweyn
Khilaaf soo kala dhex galay Wasaarada Isboortiga iyo Guddiga Olombikada Soomaaliyeed
hanad	 Oct 22, 2021
UK Scientists Investigate Delta Subvariant As Covid Cases Rise
Myanmar junta re-arrests more than 100 anti-coup protesters released…
Ethiopia launches airstrikes on capital Tigray for fourth day this…
Several killed in clash in Rohingya refugee camp in Bangladesh
Beleaguered Real Estate Giant Evergrande Makes Key Interest Payment…
Covid may have killed more than 180,000 health workers, says WHO